Qarax ka dhacay Isgoosyka Black Sea oo askari ku dhaawacmay.
Dhaq dhaqaaqa Al-Shabaab oo bayaan kasoo saaray dilalkii ka dhanka ahaa masuuliyiinta shirkada Warbaahinta Horn Afrik.
Sheekh Shariif iyo Geedi oo labada dhinacba isku eedeeyay dilka howl-wadeenadii HornAfrik kooxo Argagaxiso.
Maamulka G/Banaadir oo sheegay in labo qof loo soo qabtay dilkii Cali Iimaan Sharmaarke iyo Mahad Axmed Cilmi.
Agaasimahii HornAfrik Marxuum Cali Iimaan Sharmaarke oo Axaddii la aasay
Qarax xoogan ayaa Axadii ka dhacay isgoyska Black Sea ee magaalada Muqdisho halkaaso ay ku dhaawacmeen dad ay uu ku jiray askari ka tirsan ciidamada booliska Dowlada KMG ah ee Somalia.
Qaraxaan ayaa dhacay duhurnimadii Axadda xili halkaasi ciidamad booliska Dowlada Federaalka Somalai ay ka sameynayeen howlo baaritaano ah.
Maxamed Deeq Cali Gaab oo kamid ah ganacsatada isgoyska Black Sea ayaa qadka telefoonka iigu sheegay in saddex qof ay ku dhaawacmeen qaraxaasi oo uu kamid ahaa askari ka tirsan booliska Dowlada KMG ah ee Somalia.
Maxamed waxa uu sidoo kale sheegay in qaraxaan uu ahaa bam gacmeed lagu tuuray goob ay baarayeen ciidamada booliska Dowlada KMG ah ee Somalia, waxuuna sheegay in qasaaro uu soo gaaray goobihii ganacsiga ee u dhawaa halka uu qaraxa ka dhacay.
Max�ed Deeq waxa uu sidoo kale xusay inaysan manta dhicin in ciidamada booliska Dowlada KMG ah ee rasaas furaan taasoo maalmihii ugu dambeeyay Muqdisho ay caado u noqotay isla markaana ay qasaaro kasoo gaari jireen dadweynaha shacabka ah ee u dhow goobaha qaraxyada ka dhacaan.
Kadib markii uu qaraxaasi dhacay ayaa ciidamada booliska Dowlada KMG ah ee Somalia bilaabeen baaritaano ay ku sameynayaan goobaha u dhow dhow halka uu qaraxa ka dhacay, iyadoo wararkana ay sheegayaan inay qabteen dad u badan haween iyo dhalinyaro oo u dhawaa halkaasi.
Taliyaha ciidamada booliska saldhiga Howl-wadaag Cali Gaab oo qadka telefoonka aan kula xiriiray kadib markii qaraxaasi uu dhacay kadib ayaa ii xaqiijiyay in hal askari uu dhaawacmay isla markaana ay jiraan qasaaro soo gaaray dadweynihii u dhawaa goobta.
Isku soo duuboo, maalmihii ugu dambeeyay ayaa Muqdisho waxaa caado ka noqday qaraxyada lala eeganayo ciidamada Dowlada iyo kuwa Itoobiyaanka ee caasimada ku sugan, iyadoo inta badan qaraxyadaasi ay qasaaro lixaad leh kasoo gaaraan shacabka aan waxba galan ee ku dhaqan caasimada.
Bayaan ay soo saareen dhaq dhaqaaha Al-shabaab ee ka tirsanaa Maxkamadihii Islaamiga ayay ku eedeeyeen dilkii Marxuumada Cali Iimaan Sharmaarke iyo Mahad Axmed Cilmi inay ka dambeeyeen Dowlada Federaalka Somalia.
Dhaq-dhaqaaqa ayaa sidoo kale sheegay in ragaan loo dilay markii la arki waayay runta ay ka sheegayaan xaqiiqda Muqdisho taala, taasina ay ciidamada Dowlada sida ay sheegeen u qaarjiyeen.
Bayaanka kooxdu ay soo dhigtay Barta Internet-ka ayay ku sheegtay in aysan qaadeyn masuuliyadda falalkii lagu dilay Marxuum Mahad Axmed Cilmi oo ahaa agaasimihii Idaacadda Capital Voice iyo agaasimihii Idaacadda Horn Afrik Cali Imaan Sharmaarke.
�Al-shabaab marnaba kama dambeyso dilka mas�uuliyiintaa, al-shabaab lagama yaabo inay disho cid dalka iyo diinta u adeegeysa labadaasi qofna waxey ahaayeen mujaahidiin naftooda u waayay difaaca dalkooda� ayay ku dhaheen bayaankooda.
Al-Shabaab waxaa ay ku sheegtay bayaanka in laba ula jeedo ay ka danbeyso falalkaasi oo midkood ah in shacbiga Somaliyeed laga afduubo goobta warbaahinta ah ee ay ka helaan dhibaatooyinka gumeysiga iyo daba dhilifkiisa ay ka geystaan dalka si dadku ay u noqdaan kuwo ka indha la' dhacdooyinka.
Waxaa midka labaad ay ku sheegtay kooxdu in uu yahay sumcad xumeynta Muqaawamada hubeysan ee kasoo horjeeda Tigreeda iyo Kooxda C/laahi Yuusuf ee la shaqeysa sida hadalka ay u dhigeen,si shacabka looga dhigo in xoogaga wax iska caabinta ay dadka iska laayaan.
Si kastaba, dilka loo geystay labadaan mas�uul ee warbaahinta Muqdisho ka howlgali jireen ayaa waxa ay kusoo beegmeysa xili Saxaafada Muqdisho ay ku shaqeyneyso oo ay dhaxda ka heysato xarig labada dhinac ka gubanaya, iyadoo manta magaalooyinka dalka iyo dibadaha u kala firiraya wariyaashii ugu caansanaa ee Muqdisho ka howl-gali jireen kuwaasoo naftooda la cabsaday.
Ra�iisul-wasaaraha Dowlada Federaalka Somalia Prof. Cali Maxamed Geedi ayaa ka hadlay dilkii naxariis darada ahaa ee shalay loo geystay Agaasimaha Idaacada HornAfrik Cali Iimaan Sharmaarke iyo Wariye Mahad Axmed Cilmi.
Geedi ayaa yiri �Guulo Hordhac ah ayaa laga gaaray baaritaanada ku soconaya kuwii bahda warbaahinta laayay ,waxaana muuqanaya ku lug lahaasho argagixisanimo�.
Ra�iisul-wasaaraha waxa uu sheegay in ragaasi ay dileen kooxo uu ugu yeeray Argagaxiso caalami ah, isagoo sheegay beeniyay inay dowladiisa ka dambeyso dilka labadaasi mas�uul.
Dhinaca kale, Guddoomiyaha golaha fulinta Maxkamadaha Islaamiga Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ku eedeeyay dilka labadaasi mas�uul dowlada Federaalka iyo saraakiisha ciidamada Itoobiyaanka ee Muqdisho jooga.
Sheekha waxa uu sheegay inuu aad ugu naxay marka uu maqlay dilka labadaasi mas�uul oo dalka iyo diinta wax tar u lahaa.
�Marnaba lagama yaabo Maxkamadaha Islaamiga inay ka dambeeyaan dilka labadaan mas�uul, Maxkamadaha ma dilaan dadka dalka iyo diinta u shaqeeya ee cadowga ayay bartilmaameedsadaan� ayuu yiri Sheekh Shariif.
Agaasimaha nool ee Hornafrik Axmed Cabdi Salan waxaa uu Muqdisho isaga cararay laba todobaad ka hor, kadib markii ay hanjabaado badan kula kaceen Xoogaga Shabaabka, waxaana loogu hanjabay inuu la shaqeeyo waxa ay ugu yeeraan Cadawga dalka.
Si kastaba, Saxaafada Muqdisho ayaa manta bilaabay inay boorsooyinkooda kasoo xirxirtaan magaalada Muqdisho iyadoo magaalada Hargeysa ay soo gaareen dhowr saxafi oo caan ka ah gudaha Muqdisho kuwaaso sheegay inay naftooda lasoo baxsadeen.
Afhayeenka maamulka gobalka Banaadir Maxamed Muxyadiin Cali ayaa ii xaqiijiyay in ciidamada booliska gobalka Banaadir ay gacanta kusoo dhigeen labo qof oo lagu tuhumsan yahay inay ka dambeeyaan dilkii foosha xumaa ee shalay loo geystay howl-wadeenadii Idaacada HornAfrik Allaha u naxariiste Cali Iimaan Sharmaarke iyo Mahad Axmed Cilmi.
Cali Muxyadiin waxa uu sheegay in labadaan qof ay ciidamada sirdoonka gobalka Banaadir ay ogaadeen inay ka dambeeyaaan falkaasi kadibna lasoo qabtay iyagoo ku dhuumanaya guri ku yaala degmada Yaaqshiid ee G/banaadir.
Afhayeenka waxa uu sheegay in ragaani lagu hayo xabsi isla markaana su�aalo ay warsanayaan sirdoonka Dowlada KMG ah ee Somalia, isla markaana marka lagu cadeeyo dambigooda lasoo hortaagi doono sharciga si loo waafajiyo waxii ay galabsadeen.
�Maamulka Gobalka Banaadir mar kasta waxa uu u taagan yahay inuu wax ka qabto xaalada ammaan xumo ee magaalada, tanina waa guul aan gaarney dhawaan Saxaafada ayaa loo soo bandhigi doonaa ragaan la hayo marka uu dambiga ku cadaado� ayuu yiri Max�ed Muxyadiin Cali Afhayeenka gobalka Banaadir.
Shalay ayay aheyd markii dilkii loo geystay Wariye Mahad Axmed Cilmi oo ahaa agaasimahada Idaacada Capital Voice oo hoos tagta HornAfrik isla markaana qarax miino lala beegsaday Milkiilihii Idaacada HornAfrik Cali Iimaan Sharmaarke.
Agaasimahii HornAfrik Marxuum Cali Iimaan Sharmaarke oo Axaddii la aasay iyo Idaacada Muqdisho oo dib usoo howl-galay.
Meydka Agaasihimii HornAfrik Marxuum Cali Iimaan Sharmaarke ayaa manta lagu aasay qabuuraha Taree Disho ee duleedka magaalada Muqdisho.
Allaha u naxariistee aaska marxuumka ayaa waxaa kasoo qeyb galay Mas�uuliyiin sar sare oo ka tirsan Dowlada KMG ah ee Somalia, Madaxda iyo Wariyaasha Warbaahinada Muqdisho, Culumaa�udiin,Aqoonyahano, Ganacsato, Haween, Caruur iyo dhaman qeybaha kala duwan ee bulshada.
Mas'uuliyiintii ka qeyb gashay aaska ay ka mid ahaayeen Wasiirka cadaaladda DF Xasan Dhimbil, Wasiirka gaadiidka Max'ed Ibraahim Xaasabde, Taliyaha ciidamada booliska Somalia Cabdi Qeybdiid, Xildhibaan Xaaf iyo mas�uuliyiin oo aad u fara badan.
Dhamaan dadkii kasoo qeyb galay aaska Marxuumka ayaa wajigooda waxaa ka muuqday murugo lixaad leh, iyagoo Alle ugu wada baryay inuu Janatul Fardows galiyo.
Shalay ayay aheyd markii Marxuum Cali Iimaan Shar ma'arke, uu ku geeriyooday, kadib markii qarax ka dhashay Miino, lala beegsaday Gaari uu la socday.
Idaacadaha madaxa banaan ee magaalada Muqdisho oo ay ku jirto idaacadda Shabelle ayaa dib u bilaabay howlahooda shaqo waxyar ka dib markii uu dhacay aaska alaha u naxariistee Agaasimihii idaacadda HornAfrik Marxuum Cali Iimaan Sharmaarke.
Dib u howl-galidda idaacadaha magaalada Muqdisho ayaa ka dambeysay ka dib markii saakay duleedka magaalada Muqdisho lagu aasay Marxuum Cali Iimaan, iyadoo idaacadaha ay aamusnaayeen muddo ku dhow 22 saacadood, iyagoo muujinayay sida ay uga xun yihiin dilalka loo geystay Mas�uuliyiinta idaacadaha HonAfrik iyo Capital
Warbaahinada Muqdisho ayaa intooda badan saakay aamusnaayeen iyadoo hawada saakay lagu arkay idaacadaha Simba, Banaadir iyo Qur�aanka Kariimka ayaa manta howlahoodii warbaahineed dib u bilaabay, halka Idaacadaha Shabelle, Horn Afrik, Capital Voice, Somaliweyn iyo kuwo kale ay iyaguna weli aamusan yihiin.
Hargeysa � Somaliland